जनतामा लोकप्रिय बनेका गैडहवाका अध्यक्ष केवट - उज्यालो पोस्ट::उज्यालो पोस्ट
जनतामा लोकप्रिय बनेका गैडहवाका अध्यक्ष केवट
प्रकाशित मिति : शनिबार, माघ ८, २०७८
उज्यालो पोष्ट, सैनामैना ।
बच्चुलाल केवट आफैंमा एउटा गर्विलो नाम हो । उनका गतिविधि र क्रियाकलापलाई देख्दा लाग्छ, उनी केवल सामाजकै निम्ति समर्पित एक होनहार युवा हुन् ।
वि.स.२०३६ साल पौष २९ गतेका दिन बुवा मणिराम केवट र आमा प्रभावती केवटको कोखबाट जन्मिएका हुन् । साबिक सुर्यपुरा गाविस सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनी सानैदेखि विद्रोही स्वभावका थिए । उनका पुर्खाहरु नै सुर्यपुरा गाविसमा बस्दै आएका थिए । घरको जेठो छोराका रुपमा जन्मिएका बच्चुलाल केवटका एक भाइ र एक बहिनी छन् ।
वि.स.२०५५सालमा निर्मला केवटसँग मागी विवाह गरेका उनका एक छोरी र दुई छोरा छन् । सानैदेखि रेडियो, टि.भी.,हाउस वायरिङ्गको पसल गरेर सुर्यपुरामा वसेका केवट । सुर्यपुुरा माध्यमिक विद्यालयबाट एस.एल.सी. पास गरेका थिए । त्यसोत उनी प्राथमिक शिक्षा पढदै गर्दा देखीनै राजनीतमा राम्रो ज्ञान भएका कारण उनी सद्भावना पार्टीमा आबद्ध रहे ।
आठ, नौ कक्षामा पढ्दै राजनीतिमा रुचि राख्ने उनी सन्तेषश्वरी युवा क्लबका संस्थापक सचिव भएर काम गरे । आफैं अध्ययन गरेको सुर्यपुरा मा.वि को दुई कार्यकाल व्यवस्थापक समितीको अध्यक्ष समेत भए ।
उनले मधेसमा शिक्षाको कमीका कारण पछाडि परेको भन्दै आफ्नै पहलमा सुर्यपुरा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालानार्थ चंदा सहयोग उठाई क्याम्पस खोल्न अग्र पंक्तिमा देखिन्थे केवट ।
बच्चुलाल केवटले सानैदेखि आफूलाई सालिन,भद्र र अनुशासित व्यक्तित्वको रुपमा चित्रित गराएका छन् भने कहिलेकाहीं देश,काल र परिस्थिती अनुसार आक्रामक पनि भइहाल्छन् । बच्चु केवट धेरै मानवीय र सामाजिक कार्यहरु गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् ।
वि.स.२०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा गैडहवा गाउँपालिकाको गरिमामय अध्यक्षको पदमा अत्याधिक भोट पाएर निर्वाचित भएका केवट त्यसपछि राजनैतिक करियर सँगै गैडहवा गाउँपालिकाको गतिविधि नीति निर्माणमा थप सक्रिय भएर अगाडि बढे ।
गैडहवा गाउँपालिकाको जनताको साझा बनेर काम गरिरहेका केवटले गैडहवाको उन्नति र प्रगतिको लागि स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, आर्थीक विकास भुमि तथा भवन व्यवस्थापन, जेष्ठ नागरीक, महिला, वालवालिका तथा अपाङग, संस्कृती तथा पर्यटन पुर्वाधार विकास, वन बातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, राजश्व प्रशासन, न्याय प्राणली, शुसासन तथा सेवा प्रवाह, कृषि लगायत विकास निमार्णका क्षेत्रमा गाउपालिकामा निर्वाचित भए पछि उनले गरेका कामहरु हुन् ।
बच्चु केवट मञ्चमा चढ्ने बित्तिकै हुटिङ्ग र ताली आइ नै हाल्छ किनकि उनले मासलाई त्यस प्रकारले कन्ट्रोल गर्ने क्षमता पनि राख्दछन् । बच्चु केवटले भनेपछि गैडहवाका जनताले कुनै पनि कुरालाई नर्कान सक्दैनन् । यसबाट थाहा हुन्छ, उनले गैडहवाका जनताहरुको हक र हितका लागि कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर । बच्चु केवटको उच्च राजनैतिक, सामाजिक पूर्ण सफलताको शुभकामना !
लुम्बिनीमा धमाधम गुरुयोजना विपरीतका संरचना, सत्ता र शक्तिको आडमा बाँडिन्छन् जग्गा
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नागरिक समाजको आग्रह
गठबन्धनको जित निश्चित छ, स्वतन्त्रलाई फकाउनुपर्दैन– प्रचण्ड
भोलि इद पर्वको सार्वजनिक बिदा
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका १३३ वर्ष बित्दा पनि श्रमिकको अवस्था उही
निभा शाहको कविता टु क्लास कन्ट्री